#Jabuuti oo codsatay in goob joogayaal loo diro xuduuda Eritrea ay wadaagaan - Get Latest News From Horn of Africa
#Jabuuti oo codsatay in goob joogayaal loo diro xuduuda Eritrea ay wadaagaan
By axadle On Jul 4, 2017 Last updated Apr 2, 2019
Djibouti(AxadleTM)— Dowladda Jabuuti ayaa ka codsatay Midowga Afrika in goob joogayaal caalami u diraan xuduuda ay wadaagaan iyaga iyo Eritrea, halkaasoo uu ka jiro muran u dhaxeeya labada dal.
Jabuuti ayaa dhowaan ku eedeysay Eritrea inay qabsatay dhulka buuraleyda dumeria ee ku yaala xuduuda labada dal ay wadaagaan, kaddib markii ay isaga baxeen Ciidamadii nabad ilaalinta ee ka socday Qatar.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa u sheegay Wakaalada wararka ee Reuters in Midowga Afrika ka dalbadeen in guddi xaqiiq raadin loo diro, isla markaana la buuxiyo kaalintii Qatar baneysay.
#Biixi :Aniga si qoto dheer ayaan uga murugoonayaan geerida…
#Hogaamiye Madoobe oo Cambareyey nabadoon lagu dilay Gudaha…
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka qeyb galaya shir madaxeedka Midowga Afrika oo shalay ka furmay Addis Ababa, waxaana uu hordhigi doonaa sidii guddi kormeera xuduuda loogu diri lahaa.
Qatar ayaa ciidamadeeda kala baxday xuduuda labada dal u dhaxeya, kaddib markii Jabuuti iyo Eritrea ay taageereen xulafada uu hoggaamiyo Sacuudiga.
Arrintan ayaa keentay inuu dib u soo cuboonaado xiisada u dhaxeysa dalalka Jabuuti iyo Eritrea oo sanadkii 2008-dii ku dagaalamay xuduuda labada dal ay wadaagaan.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa labada dal ugu baaqay inay xaalada dejiyaan, isla markaana wax walba lagu dhameeyo wada xaajood iyo is faham.
axadle5353 posts 0 comments
5 hours ago 3,673
#Real Madrid oo Shaacisay xilliga ay soo bandhigayso…
6 hours ago 36,995
#Kenya has sought the intervention maritime border dispute…
6 hours ago 785,243
#Sooyaalka Maxamed Mursi Iyo Taarikh Nololeedkiisii
12 hours ago 36,714
Prev Next 1 of 3,581
#Xukumadda oo Muqdisho ka furay shir ay ka qeyb galeen…
Jun 17, 2019 36,713
#Aabaha Dhalay Abiy Axmed ayaa Isniinta…
Jun 17, 2019 36,759
#Uhuru Kenyatta: Sababta Igu Kaliftey In…
Jun 17, 2019 369,702
#Egyptian President Muhammad Mursi has…
Jun 17, 2019 785,604